ललितपुरका शाक्य जसले प्रचण्डको गाडी अगाडी आफ्नो गाडी तेस्र्याएर बीच सडकमै रोकिदिए, ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे पर्यो – Jagaran Nepal
काठमाडौं । लकडाउनको समयमा अहिले सवारी साधन चलाउन निकै क,डा नियम बनाइएको छ । मोटरसाइकलमा एक जना बस्न पाइने, नीजि सवारी साधनमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने लगायतका नियम छन् । तर सामान्य नियमलाई पनि निकै झण्झटिलो मान्ने नेपालीको प्राय बानी छ । त्यसैले सडकमा ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणको निकै त,ना,व हुने गरेका दृष्य देखिन्छन् ।
अनलाइन पत्रिकाले एउटा यस्तै समाचार प्रकाशन गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई एउटा आरोप लाग्दै आएको छ । ठूला नेता र प्रतिष्ठित ब्यक्तिका लागि नियम कडा हुँदैन, गल्ती गरेपछि सजिलै छुट पाउँछन् तर सर्वसाधारणका लागि भने सामान्य कुरा पनि छुट दिँदैनन् । काठमाडौंको सानेपामा भएको उउटा घटनालाई अनलाइन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । म जनता हुँ, मलाई नै कारवाही हुन्छ । कारवाही गर्नुस्’ एकजना सवारीचालक ट्राफिक प्रहरीसँग चर्काचर्की गरिरहे । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यी सवारी चालकले सानेपाको स्टार अस्पतालबाट लेन मि,चे,र अघि बढ्दा का,र,वा,हीमा परेका थि ।
उनी ट्राफिक प्रहरीसंग विवाद गरिरहेका थिए । ‘चिट काट्नुस्, मलाई जेलमै थुन्नुस्’ ती सवारी चालक अझै चिच्याए, ‘प्रहरीले नेतालाई केही गर्न सक्दैनन् । जनतालाई मात्र हो, तिमीहरुले कारवाही गर्ने ।’ उनलाई यति धेरै साहस कसरी आयो ? किन यसरी कराइरहेका छन् वरपर हेर्ने मानिस चकित् परे । उनले भने ‘मलाई चिनेको छ, मै हुँ प्रचण्डको बाटो रोक्ने ।’ उनले कसरी रोकेका थिए त बाटो ? कहिलेको कुरा थियो ? यति भन्दा पनि उनलाई सवारीचालकलाई ट्राफिक कार्यालय लगियो । ट्राफिक कार्यालय पुगेर पनि उनी फेरी कड्किए । ‘ केही महिनाअघिको घ,ट,ना बिर्सिनु,भयो ? कुपण्डोलमा प्रचण्डको गाडी रोक्ने मै हुँ ।’
त्यो दिन के भएको थियो खुमलटारबाट काठमाडौं हिडेको प्रचण्ड सवार गाडी बायाँबाट न,गु,डे,र ,निय,म मि,च्दै दायाँ गु,डे,को थियो । उनी पनि पछि पछि थिए । यो कुरा यिनले सहन सकेनन् । अनि यि चालकले प्रचण्डको गाडी नै छेकेर आफ्नो गाडी सडकमा तेर्सो पारेर राखिदिए । प्रचण्ड सवार गाडी अगाडी जान पाएन । अनलाईन पत्रिकाले अगाडी लेखेको छ, सुरक्षा स्रोतले भने, ‘त्यो गाडी हटाउन हामीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।’ स्रोतले भने, ‘सातजना प्रहरीले गाडीलाई ठेलेर सडकमा साइट लगाएपछि बाटो खुल्यो र प्रचण्डको गाडी अघि बढ्यो ।’
तर उनले पनि नियम मि,चे,को प्रहरीले देखेपछि रोकेको थियो । ललितपुरकै रैथाने शाक्य थरका ती सवारी साहुले भन्दै थिए, ‘म ठूला नेता र पार्टीका कार्यकर्तापनि होइन । ठूलालाई चैन, सानालाई मात्र ऐन नहोस् भनेर बुझाउन खोजेको हुँ ।’